ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ Google Home မှာ Google Assistant အသံအသစ်တွေကိုစမ်းသုံးမယ် | Myanmar Mobile App
Home How-To ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ Google Home မှာ Google Assistant အသံအသစ်တွေကိုစမ်းသုံးမယ်
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ Google Home မှာ Google Assistant အသံအသစ်တွေကိုစမ်းသုံးမယ်
Google ရေ ဒီလိုကြားရတာတော့ အရမ်းကြိုက်တယ် Google Assistant က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း Amazon Alexa ၊ Apple Siri လောက်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Google I/O မှာ ကြေညာထားတဲ့ Assistant မှာ တောက်လျှောက်ပြောတဲ့စကားဆက်တွေကို တုံ့ပြန်အားကောင်းလာမယ်လို့ ကြားထားပါတယ်။ ဒီတော့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုလည်း ခံစားရတော့မှာမို့ အသင့်ပြင်ထားလိုက်ကြပါဦး။
Google က Assistant ကို နောက်ထပ်အသံခြောက်မျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ အမျိုးသားအသံကို နောက်ဆုံးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသံအသစ်လေးတွေကို စမ်းချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ရိုးရှင်းပါတယ်။
Google Assistant အသံကို ဖုန်းမှာပြောင်းချင်ရင်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Assistant ရဲ့ settings ထဲကိုဝင်ရောက်ရမှာပါ။
Note: သင့်ဖုန်းမှာ Android 6.0 Marshmallow နှင့်အထက် အသုံးပြုထားဖို့လိုပါတယ်။
home button ကိုဖိထားပြီးတော့ Google Assistant ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။
အပြာရောင် explore button လေးက ညာဘက်အပေါ်နားမှာရှိပါတယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။
အစက်သုံးစက် menu button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Assistant voice ကို နှိ်ပ်လိုက်ပါ။
အသံအသစ်တွေက နူးညံ့တာကနေ သြသြကြီး၊ အမျိုးသားကနေ အမျိုးသမီး စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအသံအသစ်တွေကို ကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့လုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ရတာကတော့ အံ့သြစရာပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ Voice5ကို ကြိုက်ပါတယ်။ သင်ဆိုရင်ရော ဘယ်တစ်ခုဖြစ်မလဲ။
Google Home မှာရော ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ
Google Home မှာပြောင်းချင်တယ်ဆိုရ်ငတော့ ဖုန်းနဲ့ စပီကာကြားမှာ နည်းနည်းလေးပဲ ပြောင်းလဲသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google Home app ကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။
Note: Google Home ကလက်ရှိမှာတော့ Voice 1 နဲ့ Voice2ကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Google Home အတွက် တမျိုးကိုရွေးပြီးတော့ default အဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Google Home app ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
More settings ကိုနှိပ်ပါ။
Assistant voice ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါလေးပါပဲ။ အသံလေးတွေကတော့ ဖုန်းနဲ့ Google Home series အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကံဆိုးတာကတော့ ဖုန်းနဲ့ Google Home တို့မှာ အသံမတူအောင်ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Google အကောင့်တစ်ခုစီနဲ့ Google Home devices တွေကို register လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ယူအက်စ်မှာသာ အသံအသစ်တွေကို သုံးစွဲနိုင်ဦးမှာပါ။
Google ရေ ဒီလိုကွားရတာတော့ အရမျးကွိုကျတယျ Google Assistant က စှမျးဆောငျရညျမွငျ့တယျဆိုပမေယျ့လညျး Amazon Alexa ၊ Apple Siri လောကျတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ Google I/O မှာ ကွညောထားတဲ့ Assistant မှာ တောကျလြှောကျပွောတဲ့စကားဆကျတှကေို တုံ့ပွနျအားကောငျးလာမယျလို့ ကွားထားပါတယျ။ ဒီတော့ အတှအေ့ကွုံအသဈတှကေိုလညျး ခံစားရတော့မှာမို့ အသငျ့ပွငျထားလိုကျကွပါဦး။
Google က Assistant ကို နောကျထပျအသံခွောကျမြိုးထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ ၂၀၁၇ခုနှဈအောကျတိုဘာလမှာ အမြိုးသားအသံကို နောကျဆုံးထညျ့ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ အသံအသဈလေးတှကေို စမျးခငျြနတေဲ့သူတှအေတှကျ ဘယျလိုမြိုးလုပျဆောငျရမလဲဆိုတာကို ကြှနျတျောနဲ့အတူတူလိုကျပါလုပျဆောငျကွညျ့လိုကျရအောငျ။ ရိုးရှငျးပါတယျ။
Google Assistant အသံကို ဖုနျးမှာပွောငျးခငျြရငျ
ပထမဆုံးအနနေဲ့ Assistant ရဲ့ settings ထဲကိုဝငျရောကျရမှာပါ။
Note: သငျ့ဖုနျးမှာ Android 6.0 Marshmallow နှငျ့အထကျ အသုံးပွုထားဖို့လိုပါတယျ။
1. home button ကိုဖိထားပွီးတော့ Google Assistant ပျေါအောငျလုပျလိုကျပါ။
2. အပွာရောငျ explore button လေးက ညာဘကျအပျေါနားမှာရှိပါတယျ။ နှိပျလိုကျပါ။
3. အစကျသုံးစကျ menu button လေးကိုနှိပျလိုကျပါ။
4. Settings ကိုနှိပျလိုကျပါ။
5. Preferences ကိုနှိပျလိုကျပါ။
6. Assistant voice ကို နှိပျလိုကျပါ။
အသံအသဈတှကေ နူးညံ့တာကနေ သွသွကွီး၊ အမြိုးသားကနေ အမြိုးသမီး စတာတှဖွေဈပါတယျ။ အဲဒီအသံအသဈတှကေို ကှနျပြူတာနညျးပညာနဲ့လုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။ နားထောငျကွညျ့ရတာကတော့ အံ့သွစရာပါပဲ။ ကြှနျတျောကတော့ Voice5ကို ကွိုကျပါတယျ။ သငျဆိုရငျရော ဘယျတဈခုဖွဈမလဲ။
Google Home မှာရော ဘယျလိုပွောငျးကွမလဲ
Google Home မှာပွောငျးခငျြတယျဆိုရျငတော့ ဖုနျးနဲ့ စပီကာကွားမှာ နညျးနညျးလေးပဲ ပွောငျးလဲသှားတာ ဖွဈပါတယျ။ Google Home app ကို အသုံးပွုသှားမှာပါ။
Note: Google Home ကလကျရှိမှာတော့ Voice 1 နဲ့ Voice2ကိုသာ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါသေးတယျ။ Google Home အတှကျ တမြိုးကိုရှေးပွီးတော့ default အဖွဈနဲ့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
1. Google Home app ကို ဖှငျ့လိုကျပါ။
2. ဘယျဘကျ menuကိုဖှငျ့လိုကျပါ။
3. More settings ကိုနှိပျပါ။
4. Preferences ကိုနှိပျပါ။
5. Assistant voice ကိုနှိပျပါ။
ဒါလေးပါပဲ။ အသံလေးတှကေတော့ ဖုနျးနဲ့ Google Home series အပျေါမှာလိုကျပွီးတော့ နညျးနညျးလေး ခွားနားမှုရှိနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကံဆိုးတာကတော့ ဖုနျးနဲ့ Google Home တို့မှာ အသံမတူအောငျထားလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး Google အကောငျ့တဈခုစီနဲ့ Google Home devices တှကေို register လုပျထားမယျဆိုရငျတော့ ရနိုငျပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ယူအကျဈမှာသာ အသံအသဈတှကေို သုံးစှဲနိုငျဦးမှာပါ။
Previous articleXiaomi MI7 ၈နှစ်ပြည့် Edition ဖုန်းရဲ့အချက်အလက်တချို့ပေါက်ကြား
Next articleGALAXY NOTE9ရဲ့အချက်အလက်များ GEEKBENCH မှာထွက်ပေါ်